Sagantaa SWO - Kamisa Adoolessa 22, 2021 sagalee qofaan - Independent Oromia
Sagantaa SWO Kamisa Adoolessa 22, 2021
Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja'a (6) – Haarawa, Caffaa Roobiit, Gooraa, Fursee, Qiciicoo fi Cirrattii – irraa erga muramee torban tokkoo ol lakkoofsisee jiraachuu.
Poolisoonni Humna Addaa [Oromiyaa] danuun humna ABUT'n obbaafamuu
Poolisoonni Humna Addaa fi Milishoonni [Oromiyaa] baay'inaan 10,000'tti (Kuma-kudhan) tilmaamaman, kanneen humna Mootummaa Naannoo Amaaraa tumsuun, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf, torbee lama dura gama kaaba Impaayerattiitti bobbaafaman, irra-jireessi isaanii humna ABUT'n obbaafamuu; kaan ammoo harka kennachuu; kanneen hafanis, gara Walloo fi Affaaritti baqatanii jiraachuu.
Mootummaan Kooloneeffataan Impaayera Itoophiyaa, Qabsaa'otaa fi WBO, keessattuu, Qondaalota WBO ittiin adamsuuf jecha, meeshaalee ammayyaa biyya alaa irraa gara biyya keessaatti galchuun, namoota hojii kana raawwachuuf ta'an, Magaalaa Dirree Dhawaatti walitti-qabee leenjisaa jiraachuu.